Author Topic: ကိုကိုထွန်းအေးတင်တဲ့ဟာသများ (Read 243320 times)
« Reply #280 on: June 24, 2011, 12:34:49 PM »
" ခံ စား တတ် လာ ပြီ "
ဟာသကို လုံးဝ မခံစားတတ်သော လူတစ်ယောက် ရှိသည် ။ ဟာသကို ခံစားတတ်အောင်ဆိုပြီး
အခွင့်သင့်တိုင်း ဆွေမျိုးများက သူ့ ကို ရယ်စရာ ပြောပြသည် ။ တစ်နေ့ဝိုင်းဖွဲ့ စားသောက်နေ
ချိန်တွင် တစ်ယောက်က အောက်ပါ ဟာသကို ပြောသည် ။
" ပြဇာတ်ရုံမှာ ရှေးဟောင်း ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကို ကပြနေတယ်..၊ မင်းသားက ဇာတ်ညွှန်းအရ.
" မြင်းကို ငါကိုယ်တော်မြတ်ဆီ ယူလာခဲ့ ...အဲ့ဒီမြင်းအတွက် တိုင်းပြည်တစ်ဝက်ကို ပေးဖို့ဝန်မ
လေးဘူး..." လို့ ပြောလိုက်တယ်..။ အဲ့ဒီစကားလဲ ပြောပြီးရော ..ဇာတ်ရုံအပေါ်ထပ် ပွဲကြည့်စင်မှာ
ထိုင်နေတဲ့ပရိသတ်တစ်ယောက်ဆီက " မြည်း ဆိုရင်ရော မဖြစ်ဘူးလား. ." ဆိုတဲ့ ရွဲ့ တဲ့တဲ့
ပြောသံ ထွက်လာတယ်..။ ဇာတ်မင်သားဟာ အဲံဒီစကား ကြားတော့ အမူအရာ လုံးဝ ပျက်မသွား
ဘူး..။ " ဖြစ်တယ်..ဆင်းလာခဲ့..." လို့ခပ်တည်တည်နဲ့ဖြေလိုက်သတဲ့..."
အားလုံးဝိုင်းရယ်လိုက်ကြသည် ။ ထိုအထဲတွင် ဟာသဓါတ်ခံ အနည်းဆုံး ဆိုတဲ့လူက အရယ်ဆုံး
ဖြစ်သည် ။ ဒါကို ကြည့်ပြီး ၄င်း ဟာသကို ခံစားတတ်လာပြီဟုဆိုကာ ဆွေမျိုးများ ပျော်သွားကြ
သည် ။ အရယ်ရပ်သွားသောအခါ " ဟာသကို ခံစားတတ်လာသူ " က မေးသည် ။
" မြည်းကို ဘယ်လိုလုပ်ပြီး အပေါ်ထပ် ပွဲကြည့်စင်ဆီ ခေါ်တင်လာသလဲ မသိဘူးနော်..."
« Reply #281 on: June 24, 2011, 12:50:29 PM »
" သ တ္တိ အ ကောင်း ဆုံး "
မည်သည့်လူမျိုးက သတ္တိအကောင်းဆုံးနည်း ဆိုသည်နှင့် ပတ်သက်၍ အမေရိကန် ..၊ ပြင်သစ်..နှင့် ရုရှား
တို့သုံးဦး အငြင်းပွားနေကြသည် ။ အမေရိကန်က ပြောသည် ။
" ကားဆယ်စီးကို ကျနော်တို့မဲနှိုက်ယူကြတယ်....တစ်စီးမှာ ဘရိတ်မပါဘူး.၊ အဆင်းအတက်များတဲ့ လမ်း
အတိုင်း အရှိန်နဲ့ မောင်းကြတယ်..၊ အဲ့ဒီနောက် ..တစ်ယောက် ဆေးရုံပေါ်ရောက်တယ်..ကျန်တဲ့ကိုးယောက်
သူ့ ကို လူနာ လာကြည့်ကြတယ်..."
ပြင်သစ်က ပြောသည် ။
" ဒါများ အဆန်းလုပ်လို့ ..။ ကျုပ်တို့ ကို ကြည့်..။ မိန်းမချော ဆယ်ယောက်ကို မဲနှီုက်ခွဲကြတယ်..။ အဲ့ဒီအထဲ
က တစ်ယောက်မှာ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ပိုး ရှိနေတယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့အားလုံး သိကြတယ်.....၊ အဲ့ဒီနောက်
ကျနော်တို့ အထဲက တစ်ယောက် ဆေးရုံပေါ် ရောက်တယ်...ကျန်တဲ့ ကိုးယောက် လူနာ လာကြည့်ကြတယ် "
" ခင်ဗျားတို့နှစ်ဦးစလုံး သတ္တိကောင်းကြပါတယ်...၊ ဒါပေမဲ့..ကျုပ်တို့ ရုရှားတွေကိုတော့ မီမယ် မထင်ဘူးဗျ.
ကျနော်တို့ဆယ်ယောက် ၀ိုင်းဖွဲ့ ပြီး နိုင်ငံရေးဟာသတွေ ပြောကြတယ်....ကျုပ်တို့ ထဲက တစ်ယောက်ဟာ
သတင်းပေးသမား ( imformer ) ဆိုတာ ကျနော်တို့အားလုံးသိကြတယ်.."
" အဲ့ဒီနောက် ..ဘာဖြစ်သလဲ..." အမေရိကန်ရော..ပြင်သစ်ပါ ပြိုင်တူ မေးလိုက်ကြသည် ။
" ကိုးယောက် ..ထောင်ထဲရောက်တယ်...ကျန်တဲ့ တစ်ယောက် ထောင်ဝင်စာ လာတွေ့ တယ်.."
« Last Edit: June 24, 2011, 12:52:42 PM by tunaye2011 »
« Reply #282 on: June 24, 2011, 01:08:03 PM »
" ဉာဏ်ကြီးရှင် ဖြေဆိုပွဲ "
" TITANIC ဇာတ်ကားမှာ ဒီကာပရီယို ကို ဘာဖြစ်လို့ခေါင်းဆောင်မင်းသား အဖြစ် ရွေးတာလဲ..."
" စတီဗင်ဆီးဂဲ ကို ရွေးကြည့်ပါလား...အားလုံးကို သူ ကယ်လိုက်မှာပေါ့..."
" မိန်းမဟာ မျောက်နဲ့တူတယ်လို့ ပြောကြတယ်..အဟုတ်ပဲလား...."
" အဟုတ်ပဲ....မျောက်ဟာ..ဒုတိယသစ်ကိုင်းကို မဆွဲမိမချင်း..ပထမသစ်ကိုင်းကို လက်က မလွှတ်ဘူး
နို့ မဟုတ်ရင် မျောက်သစ်ကိုင်းလွတ် ဖြစ်သွားမှာပေ့ါ...."
" အဖေထက် အမေလုပ်တဲ့သူက သားသမီးတွေကို ဘာဖြစ်လို့ပိုချစ်ကြတာလဲ...."
" ရှေးဟောင်း ဂရိ အတွေးအခေါ်ရှင် အရစ္စတိုတယ် ရဲ့ အဆိုအရ ကိုယ့်ရင်သွေး ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို
အမေက ပိုပြီး စိတ်ချယုံကြည်လို့ တဲ့ဗျာ..."
" ကိုယ့်မိန်းမဟာ တစ်ခြားမိန်းမတွေအားလုံးထက် သာတယ်လို့ကြွားသင့်သလား..."
" ဘယ်တော့မှ မကြွားနဲ့ ....တစ်ခြားမိန်းမတွေ စိတ်ဆိုးသွားနိုင်တယ်...အဲ..ယောင်္ကျားတွေကျတော့
ဟုတ်မဟုတ် စမ်းကြည့်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေ ပေါ်လာနိုင်တယ်..."
" မိန်းမတစ်ယောက်ကို ချစ်စကား ကြိုက်စကား ..အကြာကြီး ပြောသင့်သလား..."
" မပြောသင့်ဘူး...ခင်ဗျားကို အပြောသမား သက်သက် ထင်သွားလိမ့်မယ်..."
« Reply #283 on: June 27, 2011, 04:01:40 PM »
" ဂေါက် သီး ရိုက် မယ် "
နာမည်ကြီး အမေရိကန် ဂေါက်သီးသမား " တိုက်ဂါးဝုဒ်စ် Tiger Woods " နှင့် နာမည်ကြီး မျက်မမြင်
ဂီတပညာရှင် " ရေးချားလ် Ray Charls " တို့အခမ်းအနားတစ်ခုတွင် ဆုံကြသည် ။ မိမိလည်း
ဂေါက်သီးရိုက် ၀ါသနာပါကြောင်း ရေးချားလ် ကပြောရာ တိုက်ဂါးဝုဒ်စ် အံ့သြသွားသည် ။ မျက်စိမမြင်
ဘဲ ဘယ်လိုရိုက်ပါသနည်း ဟု တိုက်ဂါးဝုဒ်စ် မေးရာ " မိမိ၏ဘေးတွင် ရပ်နေသော လက်ထောက်က အသံ
ဖြင့် လမ်းညွှန်သည့်အတိုင်း လိုသည့်နေရာ ရောက်အောင် ရိုက်ကြောင်း " ရေးချားလ် က ဖြေသည်။
ထိုနည်းဖြင့် ဂေါက်သီးရိုက်လို့ ရသည်ကို တိုက်ဂါး မည်သို့ မှ နားမလည်နိုင်ဘဲ ဖြစ်နေရာ" မိမိနှင့် ပြိုင်ရိုက်
မလား" ဟု ရေးချားလ် က စိန်ခေါ်သည် ။ "အနိုင်ရသူကို ရှုံးသူက ဒေါ်လာ တစ်သိန်း ပေးကြေး" ဟုလည်း
ပြောသည် ။ အလွယ်ဆုံးရမည့် ပိုက်ဆံ ဆိုပြီး တိုက်ဂါးဝုဒ်စ် ချက်ချင်း သဘောတူသည် ။
တိုက်ဂါး က မေးသည် ။
" မစ္စတာချားလ်စ်....ဘယ်တော့ ရိုက်ချင်ပါသလဲ..."
မျက်မမြင် ဂီတသမား ပြန်ဖြေသည် ။
" ခင်ဗျား ကြိုက်တဲ့ ညတစ်ညကို ရွေးပါ...."
« Reply #284 on: June 27, 2011, 04:13:54 PM »
" ဉာဏ် ကြီး ရှင် ဖြေ ဆို ပွဲ - ၂ "
" မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ကို ဘယ်နှစ်ခါ ၀မ်းသာအောင် လုပ်နိုင်သလဲ...."
" နှစ်ခါတည်းပါ...လက်ထပ်ဖို့ ခေါင်းညိတ်လိုက်တဲ့အခါရယ်...ကွာရှင်းဖို့သဘောတူလိုက်တဲ့ အခါရယ်.."
" ယောင်္ကျားတွေ ရွေ့ ဆိုင်းဖို့ဝန်မလေးတဲ့ကိစ္စနဲ့မရွေ့ ဆိုင်းချင်တဲ့ ကိစ္စ ဘာတွေလဲဟင်..."
" မင်္ဂလာဆောင်မယ့်ရက်ကို ရွေ့ ဘို့ ဝန်မလေးဘူး....အဲ...မင်္ဂလာဦးညကိုတော့..ဟဲ..ဟဲ...
ခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ....."
" တွေးခေါ်ရှင် ဆိုတာ ဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲ...."
" တွေးခေါ်ရှင် ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့..ကျနော်တို့ လို လူပဲ..။ ကျနော်တို့ ထက်တော့ ပိုပြီးနားလည်တယ်..
" မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ ..ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးမှာ နောက်ကျမှာ စိုးရိမ်ပြီး ဘယ်အခါမှာ မစိုးရိမ်ကြဘူးလဲ..."
" မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ..ချိန်းထားတဲ့နေရာကို နောက်ကျရောက်မှာ မစိုးရိမ်ဘူး...အဲ..ယောင်္ကျားယူ
" ဟာသကောင်းတစ်ခုဟာ ဟောင်းသွားနိုင်သလား..."
" ဘယ်တော့မှ မဟောင်းဘူး..ပြောတဲ့သူသာ ပြောင်းသွားတယ်....."
" အပြောနဲ့အလုပ် ညီအောင် ဘယ်လိုနေရမလဲဟင်..."
" ဘာမှ မပြောနဲ့ ....ဘာမှ မလုပ်နဲ့ ......"
« Reply #285 on: June 28, 2011, 11:55:29 AM »
" သူ့အ ထင် "
တရားရုံးတစ်ခုတွင် လုယက်မှု ကို စစ်ဆေးနေသည် ။ အလုခံရသူ အမျိုးသမီးအား တရားသူကြီးက
" တရားခံဟာ ခင်ဗျားရဲ့ဘရာစီယာထဲကနေပြီး ပိုက်ဆံကို နှိုက်သွားတယ်လို့ခင်ဗျားပြောတယ်နော်..."
" အဲ့သလို သူနှိုက်တာကို ခင်ဗျား ဘာဖြစ်လို့မခုခံသလဲ...ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဘာလို့အကူအညီ မတောင်း
အမျိုးသမီး ရှက်ကိုးရှက်ကန်းနှင့် ပြန်ဖြေသည်..။
" သူက ပိုက်ဆံကို စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ကျမက မထင်ပဲကိုး .ရှင့်.."
« Reply #286 on: June 28, 2011, 12:06:34 PM »
" အားတက်စရာသတင်း "
စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီးနောက် လူနာကို ဆရာဝန်က ပြောသည် ။
" ခင်ဗျားမှာ ဘာရောဂါမှ မရှိဘူး...နွားသိုးကြီးတစ်ကောင်လို ခင်ဗျား ကျန်းမာတယ်..
ခင်ဗျားလို ကျန်းမာရေးမျိုးနဲ့ခင်ဗျားမိန်းမ..သားသမီးနဲ့မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေ
အားလုံးကို အရင်သင်္ဂြိုလ် ပြီးမှ ကိုယ်သေရမယ့်အကြောင်းကို စဉ်းစားရမှာဗျ.."
" တကယ်ပဲလား.. ဆရာရယ်...ဒါမှ မဟုတ် ကျနော် စိတ်ချမ်းသာအောင် တမင်ပြောတာလားဟင်.."
« Reply #287 on: June 28, 2011, 12:19:08 PM »
" ပြန် လာ ပါ သည်...သို့ သော် "
လင်ပျောက်..မယားပျောက် တို့ ကို ပြန်ရောက်အောင် လုပ်ပေးနိုင်သည် ဟု နာမည်ကြီးသော အကြားအမြင်
ဆရာမထံ မိန်းမတစ်ယောက် ရောက်လာပြီး ငိုယိုကာ ပြောသည် ။
" ကျမကို ကယ်ပါရှင်....ကျမယောင်္ကျားလေ..ကျမကို ပစ်ပြီး ကောင်မလေးငယ်ငယ်တစ်ယောက်နောက်ကို
လိုက်သွားတယ်..။ ကျမမှာ ကလေးသုံးယောက်နဲ့။ သူတို့ ကို ကျမ ဘယ်လို လုပ်ကျွေးရမလဲ..၊ ကျမ
ယောင်္ကျား ပြန်လာအောင် လုပ်ပေးပါရှင်..."
အပူသည် အမိုးသမီး ပေးသော ပိုက်ဆံကို လှမ်းယူပြီး " ရောက်စေ " ဆရာမကြီးက ပြောသည် ။
" လုပ်ပေးရတာပ...ကိုင်း..စိတ်အေးအေးထားပြီး အိမ်ကို ပြန်သွားပါ...."
နောက်တစ်နေ့ မနက် အိမ်တံခါးကို ဖွင့်လိုက်သည်နှင့် အိမ်ရှေ့ တွင် မနေ့ က အမျိုးသမီး ထိုင်စောင့်နေသည်ကို
" ဆရာမကြီး " တွေ့ လိုက်ရသည် ။ သူမ၏ မျက်နှာမှာ မနေ့ ကထက် ညှိုးငယ်နေပြီး ဖြူပပ်ဖြူရော် ဖြစ်နေသည်။
လက်တွေလဲ တုန်နေသည် ။ " ဆရာမကြီး " က မေးသည် ။
" ဘာလဲ..ရှင့် ယောင်္ကျား ပြန်မလာဘူးလား..."
အမျိုးသမီး အထစ်ထစ် အငေါ့ငေ့ါနှင့် ပြန်ဖြေသည်။
" ပြန်..ပြန်..လာပါတယ်....ဒါပေမဲ့..လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်နှစ်ဆယ်က သင်္ဂြိုလ်ခဲ့တဲ့ ကျမရဲ့ပထမ ယောက် ..ယောင်္ကျား
« Reply #288 on: June 28, 2011, 12:35:51 PM »
" မြင် မှ သ တိ ရ တယ် "
တိရစ္ဆာန်ရုံတွင် ဖြစ်သည် ။ ပီတာလေးက အဖေ ဖြစ်သူကို ပြောသည် ။
" ဖေဖေ...ဟိုမှာ ကြည့်စမ်း..။ မျောက်မကြီး တစ်ကောင် ..အရုပ်ဆိုးသလောက်
" ကျေးဇူးပဲ.သားရေ.....သားပြောမှပဲ ဖေဖေ သတိရတော့တယ်....မင်းမေမေက
နေ့ လည် ၁၂ နာရီ ထမင်းစားချိန်မတိုင်မီ ပြန်လာခဲ့လို့မှာလိုက်တယ်ကွ...လာ..ပြန်ကြရအောင်..."
" အ ကြောင်း ရင်း ကို သိ ပြီ. "
ပီတာလေးသည် အဘွားဖြစ်သူထံ ကပ်လာပြီး ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားသော အသံဖြင့် ပြောသည် ။
" ယောင်္ကျားနဲ့မိန်းမ ဘာကြောင့် အတူတူ နေကြသလဲဆိုတာ ကျနော် သိပြီ..."
" ဘာကြောင့်လဲကွဲ့ငါ့ မြေးရဲ့ ..."
" ယောင်္ကျားတစ်ယောက် မိန်းမ မယူဘူးဆိုရင် သူ သားသမီး ရမှာ မဟုတ်ဘူး.."
" မိန်းမကကော ကွယ်.."
" မိန်းမဟာ ယောင်္ကျားမယူဘူးဆိုရင် အစာငတ်ပြီး သေမယ်လေ..."
« Reply #289 on: June 28, 2011, 12:47:39 PM »
" မ မေ့ နဲ့နော် "
လေယာဉ်သည် အမြင့်ပေ တစ်သောင်းကျော်မှ ပျံသန်းလာသည် ။ ရုတ်တရက် လေပြင်းမုန်တိုင်း ကျလာသည် ။ လေယာဉ်သည် ဟိုလူး ဒီလူးနှင့် လှုပ်ခါနေသည် ။ မိနစ် အနည်းငယ်ကြာမှ တည်ငြိမ်သွားသည် ။ မိုက်ကရိုဖုန်းမှတစ်ဆင့် လေယာဉ်မှူး၏ အသံကို ကြားကြရသည် ။
" လေးစားအပ်တဲ့ ခရီးသည်များ ခင်ဗျာ....နားလည်မှုနှင့် သည်းခံပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်..
ကျနော်တို့လေယာဉ် ပုံမှန် ပျံသန်းနေပါပြီ ခင်ဗျာ...."
ခဏအကြာတွင် လေယာဉ်မှူး၏ အသံကို ကြားကြရပြန်သည် ။
" ခုနေများ ကော်ဇိခါးခါး တစ်ခွက် သောက်ပြီး လေယာဉ်မယ်လေးနဲ့ဖက်အိပ်လိုက်ရရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ..."
" ခရီးသည်တွေ အကုန်ကြားနေရတယ် " ဟု သတိပေးရန် ပိုင်းလော့တွေ အခန်းဖက်သို့လေယာဉ်မယ် ပြေးသည် ။
ခရီးသည်တစ်ယောက်က သူမကို လှမ်းပြောသည် ။
" ကော်ဖီခါးခါးတစ်ခွက်လည်း သူ သောက်ချင်သတဲ့နော်..မမေ့နဲ့ ဦး...."